पाँचथरमा जस्तै अर्घाखाँचीमा दोहोरियो अर्को घ’टना, ज्वाईंले ताण्डव मच्चाउँदा… – " Smart Khabar "
काठमाडौं। अर्घाखाँचीको भुमिकास्थान नगरपालिकाको नुवाकोटमा ससुराली आएको ज्वाईले उप’ध्रो मच्चाएका छन् । उनले ससुरालीमा रहेका परिवारका सदस्यलाई धारिलो हतियार प्र*हार गरेर घाइते बनाएका छन् । खुकुरी प्रहा*रबाट श्रीमती, सासू र सालो घाइते भएका हुन्।
कालापानी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लैजानु दुई देशबीच विवाद सिर्जना गर्नु मात्र हो
हे भगवान् ! मेरो काममा राजनीति नपसोस् ! : सन्दुक रोइत